सहिद र बलिदानी मूल्य — sancharkendra.com
नेपाली जनताको मुक्तिकामी अभियानमा सर्वप्रथम लखन थापाले सहादत प्राप्त गरे । राणाविरोधी आन्दोलनमा गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्रीले हाँसीहाँसी जीवनाहुति दिए । युवा–विद्यार्थी चिनियाँकाजी श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी किसान नेता भीमदत्तदेखि विद्रोही कामी बुढा मगरले पनि महान् सहादत प्राप्त गरे । पूर्वी नेपालको बारा, पर्सा, रौतहटमा २०११÷०१२ तिर सशक्त किसान आन्दोलनका क्रममा मुखलाल महतोदेखि पञ्चायती निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलनमा मधेसका कामेश्वर र कुशेश्वर यादवले पनि नेपाली धर्तीमा आफ्नो अमूल्य रगत बगाए ।
पञ्चायती शासनविरोधी काङ्ग्रेसले सुरु गरेको हतियारबद्घ सशस्त्र सङ्घर्षमा ओखलढुङ्गाको टिमुरबोटेमा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापादेखि २०२८÷०२९ सालको झापा सशस्त्र विद्रोहको क्रममा नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल, नारायण श्रेष्ठ र रामनाथ दाहालले पनि रगत बगाए । क्रान्तिकारी नेता ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ देखि सम्झना दाहाल, टङ्क भुसाल, सात बर्से बालक अनिश शाक्यलाई पनि त्रूmर शासकले बाँकी नराखे पनि जनताले बलिदानीपूर्ण प्रतिरोध जारी राखेका छन् । जनयुद्धका क्रममा यो बलिदानीपूर्ण प्रतिरोध उत्कर्षमा पुग्यो । सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष वैज्ञानिक समाजवाद हु“दै साम्यवादसम्म जाने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अघि बढेको जनयुद्धमा बलिदानको अद्वितीय पिरमीड कायम भयो ।
२०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सुरु गरिएको महान् जनयुद्ध वीरता, बलिदान, सहादत अनि अमरताको ऐतिहासिक घटनाक्रम थियो । वर्गविहीन समाजको परिकल्पनामा जनता पहिलोपटक वर्गबैरीका काला अखडाहरूमा धावा बोल्न मात्रै तयार भएनन्, मृत्युलाई जितेर स्वर्णिम इतिहास निर्माणका लागि अभिप्रेरित भए । त्यसरी मृत्युलाई जितेर महान् सहादतको कोटिमा आफूलाई परिचित गराउनेमध्ये एक हुनुहन्छ, गोरखाका दिलबहादुर रम्तेल । जनयुद्ध सुरु भएको १३ औँ दिनमा नै एघार वर्षीय रम्तेललाई आततायीहरूले कायतापूर्ण तरिकाले हत्या गरे ।
सामन्ती दासताका विरुद्ध पहिलोपटक जनताले हतियार उठाएको १३ औँ दिन बित्दै थियो । गोरखा–जराङस्थित ब्रह्मचारिणी निमाविमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत कलिला विद्यार्थीहरूलाई तर्साएर–धम्क्याएर जनयुद्ध रोक्ने दुस्साहस गरियो । फागुन १४ गते घ्याम्पेसालबाट निस्केको एक प्रहरी जत्थाद्वारा सूर्यज्योति माविका प्रधानाध्यापक वीरवहादुर गुरुङलाई पोखाराटारको सुकेटारस्थित एक गैरसरकारी संस्थामा आगजनी गरेको आरोपमा विद्यालयभित्रै छोपियो । इमानदार र लोकप्रिय आफ्ना गुरुलाई स्कुलहाताभित्रैबाट अमानवीय र अन्यायपूर्ण गिरफ्तार गर्न खोजेपछि करिब ७ सय विद्यार्थीहरूले प्रहरीको कडा प्रतिवाद गरे । प्रधानाध्यापक गुरुङलाई नछोडेपछि विद्यार्थीहरू प्रहरीकै पछिपछि नजिकै रहेको ब्रह्मचारिणी निमाविमा आइपुगे ।
जनदबाब र प्रतिरोधपछि आतङ्कित प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गर्न थाल्यो । प्रहरीद्वारा भीडमा अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा ११ वर्षीय दिलबहादुर रम्तेल र स्थानीयवासी रामप्रसाद भट्ट गम्भीर घाइते हुनुभयो । घाइते दुवैजनालाई उपचारका लागि अस्पतालतर्फ लैजाँदै गर्दा तारलेडाँडा भन्ने स्थानमा दिलबहादुरको सहादत भयो ।
झापाको सुखानीमा २०२९ साल फागुन २१ गते नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवाहरूलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको थियो । झापाका विद्रोहीहरूलाई २०२९ कात्तिकमा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरेर झापा जेलमा राखिए पनि विद्र्रोह झन् तीव्र भयो । त्यतिखेर झापाली कम्युनिस्टले जमिनदारलाई सफाइ गर्ने अभियान ‘एक्सन’ बढाइरहेका थिए । झापाबाट इलाम जेल सार्ने बहानामा फागुन २१ गते राति सुखानीको जङ्गलमा पाँचैजनालाई गोली हानेर हत्या गरिएको थियो ।
२०२९ साल फागुन २१ गतेको बिहान क्रान्तिका लागि हिँडेका योद्धाहरूलाई जेल सार्ने निहुँमा झापाको चन्द्रगढीस्थित कारागारबाट निकालिँदै थियो । त्यो दिन अरू दिनभन्दा कारागारमा बेग्लै किसिमको त्रास थियो । त्यहाँ सयौँ बन्दीहरू थुनिएका थिए तर ती बन्दीहरूमध्ये पाँचजनालाई मात्रै जेल सार्ने बहानामा बाहिर निकालिँदै थियो । झापा विद्रोहमा सामेल भएका र त्यसैको अभियोगमा समातिएका बन्दीहरूलाई नेल, हत्कडी र शरीरै ढाकिने गरी डोरीले बाँधिँदै थियो । यो दृश्य प्रत्यक्ष आँखाअगाडि नै देखिरहेका अरू बन्दीहरूको मनमा भने नराम्ररी चिसो पसेको थियो ।
उनीहरू खासखुस भन्दै थिए, “यो सबै तयारी सरुवाको हो कि सफायाको !” बन्दीहरूले जे आशङ्का गरेका थिए, आखिर त्यही भयो जेल सरुवाको नाममा झापाको चन्दगढीबाट इलामको लागि भनेर लगिएका बन्दीहरूलाई झापाको सुखानीखण्डमा पु¥याएर हत्या गरियो र भनियो– सुरक्षाफौजको नियन्त्रणबाट भाग्न खोज्दा पाँचजना बन्दीहरू सुरक्षा फौजको कारबाहीमा मारिए । तत्कालीन अञ्चलाधीश छिरिङ तेञ्जिनको ठाडो निर्देशनमा उनीहरूको हत्या गरिएको थियो । पञ्चायती शासकहरूले झापामा किसान विद्रोहको नाममा आतङ्क फैलाएको कथित आरोपमा क्रान्तिका लागि वर्गसङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका पाँच योद्धाहरू नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल, नारायण श्रेष्ठ र रामनाथ दाहालको नृशंस हत्या गरे ।
महान् सहिदहरूको त्याग र बलिदानलाई भयानक अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध माओवादीले सचेत पहलकदमीका साथ बलिदान दिवस–सहिद सप्ताहलाई मनाउने निर्णय गरेको थियो । १० बर्से भीषण जनयुद्धका क्रममा जब क्रान्तिकारी योद्धाहरू ढल्दै जान थाले, त्यसले पार्टीभित्र वेदना, व्यथा, पीडा र निराशासमेत हुने र हुन सक्ने कुरालाई ध्यान दिंदै तिनमा क्रान्तिकारी उत्साह र आशावाद जोगाइराख्न बलिदान दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो ।
वर्गसङ्घर्ष उच्चतामा जान थालेपछि तथा बलिदान र वीरताको गाथा कोरिँदै जान थालेपछि महान् सहिदहरूको सपनालाई सम्झिँदै पार्टी–पङ्क्तिभित्र क्रान्तिप्रतिको ऊर्जा जोगाइराख्न बलिदान–सहिद दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । क्रान्तिका मोर्चाहरू फरक भए पनि क्रान्तिकारीहरूको उद्देश्य एउटै हुने सच्चाइलाई आत्मसात गर्दै माओवादीले सुखानीका महान् सहिदहरूको बलिदानलाई समेत ऐतिहासिक कडीका रूपमा जोड्दै सहिद सप्ताह मनाउन थालेको हो । जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेलदेखि सुखानीका सहिदहरूको बलिदानलाई जोडेर सहिद सप्ताहका रूपमा सुरुआत गरेको विषय माओवादीको आफ्नो दस्तावेजमा अत्यन्तै महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । बलिदान दिवसका रूपमा मनाइने यसलाई माओवादीले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (२०५७) ले दस्तावेजमै लिपिबद्ध गरेको भए पनि २०५४ सालबाटै बलिदान दिवस मनाउन थालिएको थियो ।
त्यसबेलादेखि सहिद सप्ताहलाई केन्द्र, जिल्ला र गाउँ तहसम्म आफ्नो सापेक्षतामा मनाउने गरिएको छ । महान् सहिदहरूको त्याग, बलिदान, वीरता तथा शौर्यलाई आत्मसात गर्दै कम्युनिस्ट÷सर्वहारावर्गको आमूल परिवर्तन र मुक्तिका खातिर प्रेरणास्वरूप सुरु गरिएका सप्ताहहरूले साँच्चै क्रान्तिको कडीलाई नयाँ ढङ्गले जोड्ने मद्दत पुगेको छ । सुखानीको वीरता अनि जनयुद्धभित्रको अदम्य साहसलाई बलिदान सप्ताहले लिपिबद्ध गरेको छ । यसले जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल मारिएको दिन फागनु १४ गते र झापा आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त झापाका अग्रणी योद्धालाई मारिएको फागुन २१ गतेको सुखानी हत्याकाण्डको दिनलाई जोडेर सहिद सप्ताहका रूपमा मनाउँदै आएको ऐतिहासिकतालाई जोडेको छ । बलिदान दिवसभित्र राणाशासनविरुद्ध विद्रोह गरेका गोरखाका प्रथम सहिद लखन थापाको बलिदानलाई समेत जोडिएको छ ।
नेपालमा विगतदेखि समकालीन एकीकृत जनक्रान्तिसम्म भएका क्रान्ति, सङ्घर्ष र बलिदानको कडी तथा महत्वपूर्ण घटनाहरूलाई जोड्ने आमूल परिवर्तन, अग्रगमन, जनताको मुक्ति र परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई आत्मसात गर्नका लागि बलिदान दिवस सहिदी मूल्य र तिनका सपना पूरा गर्न महत्वपूर्ण छ । देश र जनताका लागि लडेर सहिद हुनुभएका महान् सहदिहरूका स्मरण, सम्झना, सम्मानस्वरूप आयोजित सहिद सप्ताह (फागुन १४–२१) महान् सहिदहरूको स्मरण र सम्झना गर्ने महान् सन्दर्भ हो । यो देश र जनताका मुक्तिका लागि क्रान्तिकारी धारा दरोसित पक्रन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने बेला सन्दर्भ पनि हो ।
जनयुद्धलाई झापा विद्रोहकै निरन्तरता र त्यसको कडीको रूपमा व्याख्या गर्दै दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘झापा विद्रोह नेपाली क्रान्तिको एउटा कोशेढुङ्गा हो, त्यसलाई हामीले जनयुद्धको माध्यमबाट त्यसका लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई जोडेर नेपाली क्रान्तिलाई विजयको सन्निकट पु¥याएका छौँ । अब नेपाली क्रान्ति केही समयमै विजयी बन्नेछ र झापा विद्रोहको सपनासमेत पूरा हुनेछ । सहिदको रगत र जनयुद्धका क्रममा पोखिएको रगत र बलिदान दिएका सहिदको सपना पूरा गर्नु आम क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो ।’ यो कडी एकीकृत जनक्रान्तिसित पनि जोडिन आइपुगेको छ ।
देश, जनता र समाजको मुक्ति, प्रगति र अग्रगामी परिवर्तनका लागि आफूलाई सचेत ढङ्गले बलिदान गर्ने महान् व्यक्ति नै सहिद हुन्छ । असचेत मृत्यु सहिदी मूल्यमा पर्दैन । अचेल उद्देश्यहीन असचेत मृत्युलाई पनि सहिदी मृत्युमा गणना गर्न थालिएकाले सहिदको अवमूल्यन हुँदै गएको छ । सामन्तवादले खडा गरेका विभेद, दासता, शोषण र दमनका पर्खालहरू भत्काउन नेपालमा विभिन्न समयमा थुपै्र सपूतहरूले रगत बगाएका छन् ।
सबै किसिमका मानवता विरोधी देशी, विदेशी, उत्पीडित र शोषणबाट मुक्त भएर सुन्दर समाज, सुन्दर जीवन अनि सभ्य र उच्च समाजको निर्माण नहुँदासम्म सहिदी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । परिवर्तनको अर्को नाम नै बलिदान हो । नेपालमा इतिहासको प्रत्येक चरणमा सहिदहरूको बलिदानले यथास्थितिको एउटा पर्खाल भत्काएको छ र अग्रगामी परिवर्तनको ढोका खोलेको छ तर त्यसलाई संस्थागत गर्न नपाउँदै सहिदका महान् उद्देश्यलाई प्रतिगामी तत्वले कुल्चँदै आएको छ । नेपालमा यो दुःखद् शृङ्खलामा पछिल्लोपटक प्रचण्ड–बाबुरामहरू जोडिए । यस्तो गलत विरासतको अन्त्यको निम्ति सङ्घर्ष नै पहिलो कार्यसूची हो । अग्रगामी परिवर्तन र मानवमुक्तिकै लागि नेपालमा जनयुद्ध भएको थियो ।
जनयुद्ध सबैखाले दासता र पराधीनताको अस्वीकृति थियो । यही अभिव्यक्ति स्वरूप जनताले महान् बलिदान गरे । नेपालको इतिहासमा यो बलिदान अद्वितीय छ । जनयुद्धमा अभिव्यक्त भएको महान् त्याग र समर्पणले सामन्ती राजतन्त्रको गजुरलाई धुलोमा सुताइदिएको भए पनि अग्रगामी परिवर्तनका ढोकाहरू पुनः अवरुद्ध हुने अवस्थामा पु¥याइएका छन् । सहिद कुनै एक्लो व्यक्ति होइन, त्यो मुक्ति, क्रान्ति, प्रगति, न्याय, समानता, र अग्रगामी परिवर्तनको समष्टि हो । यो गद्दारी, आत्मसमर्पण, बेइमानी र विसर्जनविरुद्धको खबरदारी पनि हो ।
यो त्याग, बलिदान, समर्पण, उदात्तता, मानिसको सुन्दर भविष्य र जनकल्याणको प्रतिबिम्बन हो । यो मुक्ति र स्वतन्त्रताको कहिल्यै ननिभ्ने ज्योतिपुञ्ज हो । त्यसैले सहिदसँग जीवनको स्पन्दन छ, सुन्दरता छ, गन्तव्य छ र परिवर्तनको अविरल धारा छ । मावनमुक्ति, उन्नति र प्रगतिका मूल्य, विचार र आदर्शहरूमा सहिद बाँचेको हुन्छ । सहिदको आदर्श ओझेलमा पार्नु भनेको अधोगति हो । हामीले इतिहासको यस सङ्गीन घडीमा महान् सहिदहरूको सपना साकार तुल्याउन प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने सन्दर्भ पनि हो ।
सहिदका सपना पूरा भएका छैनन् । हाम्रा अगाडि महान् सहिदहरूका रगतले लेखेको इतिहास, उनका जीवनोत्सर्ग, आस्था, बलिदानका सपना र विचारको निष्ठाले औंला ठड्याएर आज पनि सचेतना दिइरहेको छ कि नयाँ नेपाल निर्माणको सपना नभुल्नू, सर्वहारावर्गको राज्यव्यवस्था स्थापनाको सङ्कल्प नछोड्नू, सामनता, न्याय र स्वतन्त्रताको समाज स्थापना गर्ने दृढ अठोट नबिर्सनू, सामन्ती र साम्रान्वादी उत्पीडन, दमन र शोषण विरुद्ध सधैँ जागिरहने निष्ठा र समर्पणलाई नछोड्नू आदि । तिनले हामीलाई प्रतिरोध संस्कृति, त्याग, बलिदानको संस्कृति र वर्गसङ्घर्षको संस्कुतिलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सन्देश दिइरहेका छन् ।
शौर्य, साहस र वीरताको १० बर्से जनयुद्ध वर्गसंस्कृतिको स्मरण गराइरहेछन् । मुक्तिका लागि क्रान्ति–बेदीमा आत्माहुति चढाउन तयार रहनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा शासकका बर्बर र अमानवीय तानाशाही सत्ताले क्रूरताको पीरामीड खडा ग¥यो । तिनले वर्गीय विचार र आस्थामा धावा बोले तर जनताले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गरे । त्यो निरन्तर सङ्घर्षको सन्देश पनि थियो । त्याग, निष्ठा र समर्पणको निरन्तर आत्मसातीकरणबिना हामीले अग्रगमनको यात्रा गर्न सक्तैनौँ ।
वर्गमुक्तिको यात्रामा वर्गचेतना, वर्गप्रेम र वर्गघृणालाई साम्यवादको युगसम्म जीवित राख्ने र वर्गसङ्घर्षलाई लगातार अघि बढाउँदै सर्वहारावर्गलाई अन्तिम विजय नहुँदासम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धतालाई आजको एकीकृत जनक्रान्तिमा जोड्न आवश्यक छ । सहिदका सपना जिउँदै छन्, जनताको आमूल परिवर्तनको आकाङ्क्षा ताजै छन् । यो बेला विचार, बलिदान, विश्वास र रूपान्तरणलाई तिलाञ्जली दिएर प्रतिक्रियावादसामु लम्पसार परेका प्रचण्ड–बाबुरामहरू नकारात्मक प्रतिबिम्बलाई पनि भुल्नुहुँदैन, किनकि यी नेपाली राजनीतिका अक्षम्य भयानक नकारात्मक बिम्ब हुन् ।
जनयुद्धमा उच्च तहबाट पनि सहादत भएको छ । तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य वाग्ले ‘वासु’ लाई २०५६ साल भदौमा गोरखाको गाँखुमा प्रहरीहरूले गिरफ्तारपछि हत्या ग¥यो । उहाँसँगै भीमसेन पोखरेललाई पनि पासविक तरिकारले हत्या गरियो । रोल्पाका जनमुक्ति सेनाको चौथो डिभिजन कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनिल’ लाई रोल्पामा कमान्डो प्रशिक्षण चलिरहेको बेला शाहीसेनाले हानेको एचएमजीको गोली लागि सहादत भयो ।
केन्द्रीय सदस्य परिवर्तन, कुमार, विशाल र प्रतापको पनि जनयुद्धका क्रममा उच्च सहादत भयो । पोस्टबहादुर बोगटी र हितराज पाण्डेका छोरा रवि बोगटी र मिलन पाण्डेको पनि सहादत भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवम् प्रवक्ता खड्बहादुर विक ‘प्रकाण्ड’ ले पनि आफ्नो दुई भाइलाई गुमाउनुभयो । उहाँका भाइ योद्धा जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो भने अर्का भाइ जिल्ला नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी, तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका प्रमुख (हाल उपराष्ट्रपति) नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ को भाइको पनि जनयुद्धमा सहादत भयो भने तत्कालीन अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष जयपुरी घर्तीले जीवनसाथी गुमाउनुभयो ।
गोरखा जेलब्रेककी कमान्डर उमा भुजेल, नेताहरू सरला रेग्मी, दामा शर्मा, धर्मशिला चापागाईं, कञ्चन खनाल, शोभा कट्टेलले पनि जीवनसाथी गुमाउनुभयो । महान् वर्गसङ्घर्षमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरूको तथ्याङ्क अझै पनि पूर्ण भइसकेको छैनन् । सहिद प्रतिष्ठानअनुसार सहिद तथ्याङ्कमा कोचिला २८६, लिम्बुवान किराँत ४१५, अवध २१६, भोजपुरा २४८, मिथिला ३६१, ताम्सालिङ १११४, नेवाः ४०, तमुवान ४५१, मगराँत १८८८, थारुवान १००३, भेरी–कर्णाली १५१३, सेती–महाकाली ५५७, जनआन्दोलन ३२, गौर हत्याकाण्ड २८ गरी कूलमा यो सङ्ख्या ८,८९५ रहेको बताइएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिका प्रथम सहिद कमरेड सनराइज हुनुहुन्छ ।
महान् सहिद ज्वारकी आमा असोजी पुन भन्नुहुन्छ, “छोराको धेरै सम्झना आउँछ, छोराका साथीहरू देख्दा सबैलाई छोराजस्तै मान्छु । देश र जनताका लागि हाम्रो छोरा गयो तर अहिले खै के भयो, के भयो ? जनताका लागि लडेको भन्थ्यो, जनताले के पायो कि पाएन, थाहा छैन । सहिद परिवारलाई हेरेको छ कि छैन, थाहा नै पाएको छैन । हामी त डाँडामाथिको जूनजस्तो भयो, जनतालाई राम्रो होस् । सहिद ज्वारकी जीवनसङ्गिनी सम्झना घर्ती भन्नुहुन्छ, “हामी सहिद परिवार भएको हुनाले गर्वको अनुभूति गर्छौँ । उहाँले देश र जनताका निम्ति बलिदान दिनुभएको हो ।
सहिदहरूलाई माओवादी र राज्यले राष्ट्रको निधिका रूपमा लिनुपर्दछ । यसको सँगसँगै राज्यले सहिद परिवारलाई जसले राष्ट्र र जनताका लागि बलिदान दियो, त्यसलाई कसरी हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यावहारिक नीतिहरू बनाएर सहिद परिवारहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनुपर्छ । सहिदहरूको सपना पूरा गर्नका लागि आफ्नो आधारभूत लक्ष्यबाट दायाँबायाँ गर्नुहुँदैन । उहाँ ३३ वटा सफल कारबाहीहरूमा सहभागी हुनुभयो । उहाँको सबभन्दा सफल कारबाही कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको सिद्धरा हो । उहाँको वीरता, बलिदान र पार्टीको लागि त्याग, समर्पणको मूल्याङ्कन गरेर सहिद परिवारको हेरविचार गर्नुपर्दछ । जनयुद्धमा पार्टी÷क्रान्तिले होनाहार योद्धा, कमान्डरहरू जन्मायो, गुमायो । महान् योद्धा, कमान्डरहरूको बलिदान त्याग, समर्पण र लक्ष्यबाट विचलित हुनुहुँदैन । जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
नेत्र घिमिरेका भाइ धर्म घिमिरे भन्नुहुन्छ, “दाजुलगायत अरू पाँचै जनालाई तत्कालीन राज्यले दर्जनौँ मुद्दा लगाएको थियो । गाउँ, सहरमा भएका आपराधिक हत्या तथा घटनाको मुद्दा लगाएर क्रान्तिकाकारी भनेका केवल अपराधी हुन्, उनीहरूसँग विवेक र विचार हुँदैन भन्ने प्रस्ट्याउन खोजिएको थियो । दाजुले देखेको सुन्दर नेपाल निर्माण गर्ने सपनालाई पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । जनताले सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक लैङ्गिक अधिकारहरू पाइसकेका छैनन् । ती अधिकारहरू जनताले नपाउँदासम्म सङ्घर्ष गर्नु नै सहिदहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो ।
वर्ग मेटाउने र वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ जनताले आफ्नो जीवनाहुति दिए । उनीहरू जनमुक्ति र सुन्दर सपना साकार पार्न दीपशिखा बनेका छन् । उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि जनताले कोरेको बलिदानको इतिहास अनुपम छ । न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको यो लामो अभियानमा लखन थापादेखि दिलबहादुर रम्तेल हु“दै हजारौं सर्वोत्तम छोराछोरीले दिएको बलिदान सामान्य छैन । जब क्रान्तिकारी योद्धाहरू ढल्दै जान्छन्, वेदना, व्यथा, पीडा थपिँदै जान्छ । जित–हारको शृङ्खला थपिँदै जान्छ । महान् उद्देश्य प्राप्तिको महासागरमा रगतको लेनदेन हुन्छ ।
बलिदान र वीरताको गाथा कोरिन्छ अनि सहिदहरूको सपना पूरा गर्ने अठोट पनि सच्चा क्रान्तिकारीहरूले गर्दछन् । सहिद व्यक्तिगत स्वार्थबिना काम गर्ने र देश र जनताको भलाइका लागि आफ्नो ज्यानको समेत बलिदान दिने व्यक्ति मानिन्छन् । जुनजुन देशमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्रान्ति भएका छन् त्यहाँ स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मुक्तिका लागि बिना–स्वार्थ देशका लागि मानिसले आफ्नो बलिदानी दिएका छन् । यसको मूल्य र सपनाको क्षितिज निकै माथि छ । यो आकाङ्कक्षीको छाती निकै फराकिलो छ तर पनि आजभोलि जनताका घर–आँगनमा फेरि दुश्मन मार्चपास गर्ने खोजिरहेको छ । नयाँ उचाइबाट अर्को युद्ध अर्थात् एकीकृत जनक्रान्ति लड्नुपर्ने भएको छ ।
केही नेताले धोका दिन सक्छन् तर पनि क्रान्तिको प्रवाह रोकिँदैन । क्रान्तिको सामूहिकीकृत ऊध्र्वगामी दिशा पक्रनु आजको आवश्यकता हो । क्रान्तिको ऊध्र्वगामितामा सहिदीमूल्य हुन्छ । सहिद मुक्ति, क्रान्ति, प्रगति, न्याय, समानता, र अग्रगामी परिवर्तनको समष्टि हो । यो हरेक गद्दारी, आत्मसमर्पण, बेइमानी र विसर्जनविरुद्धको खबरदारी पनि हो । यो त्याग, बलिदान, समर्पण, उदात्तता, सुन्दर भविष्यको प्रतिबिम्बन पनि हो ।
आज सहिदहरू हामीलाई औंला ठड्याएर भनिरहेका छन्– वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद स्थापनाको सपना नभुल्नू, सर्वहारावर्ग÷कम्युनिस्टको राज्यव्यवस्था स्थापनाको सङ्कल्प नछोड्नू, समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको समाज स्थापना गर्ने दृढ अठोट नबिर्सनू, सामन्तवादी र साम्राज्यवादी उत्पीडन, दमन र शोषणका विरुद्ध सधैँ जागिरहने निष्ठा र समर्पणलाई नछोड्नू ! सहिद मुक्ति र स्वतन्त्रताको कहिल्यै ननिभ्ने ज्योतिपुञ्ज हो । त्यसैले सहिदसँग जीवनको स्पन्दन छ, सुन्दरता छ, गन्तव्य छ अनि परिवर्तनको अविरल धारा छ । मानवमुक्ति, उन्नति र प्रगतिका मूल्य, विचार र आदर्शहरूमा सहिदहरू बाँचेका हुन्छन् ।